Iindaba -Igama langaphandle lesinxibo uKathmandu ubhengeza iprojekhthi yemephu ejikelezayo
I-brand yase-New Zealand esekwe ngaphandle yase-Kathmandu isebenzisene ne-The Renewal Workshop, umboneleli ophambili wezisombululo zetyhula, ukukhaba iprojekhthi yemephu ejikelezayo yokubonelela ngeenkqubo zokuhlaziya kunye nokucebisa kubathengi bayo kwixa elizayo. I-brand ikwabongoze amashishini ezemfashini kwi-Australasia ukuba ijoyine nawo ukunciphisa inkunkuma yendwangu.
“Kuyasivuyisa ukusebenzisana ne-The Renewal Workshop ukuba sisebenze kunye ukwenza indima yethu ekunciphiseni inkunkuma elukiweyo, kwaye sibe ngabokuqala kumashishini amaninzi e-Australia nase-New Zealand ukusebenzela ukujikeleza. Olu bambiswano linyathelo lokuqala elibalulekileyo ekufezekiseni injongo yethu yozinzo ka-2025 yokudibanisa iinqununu zoqoqosho olujikelezayo kwimisebenzi yethu yeshishini, utshilo uReuben Casey, iCEO, uKathmandu, ngokweengxelo zeendaba zase-Australia.
"Njengeshishini elithembele kwintsebenziswano kunye nenkqubela phambili yamaqabane e-brand kunye nokuzinikela ekwabelaneni ngako ngokuzinzileyo, asinakucinga ngeqabane elingcono kunoKathmandu lokuphonononga ukubakho kwesetyhula ngenkqubo yeMephu yeSetyhula, utshilo uNicole Bassett , Umseki-mbumbulu, Indawo yokusebenzela ehlaziya.
Ubambiswano lolokuqala ngohlobo lwayo olwenzelwe ukujongana nenkunkuma yamalaphu kwingingqi yaseAustralasia.